Saosy vinaingitra be vitamina C
Mifototra amin’ny fandrindrana ny sakafo voalanjalanja no antoka hananana lanja tsy mihoatra, ara-dalàna ary indrindra ny fahasalamana. Manan-karena legioma sy voankazo isika eto Madagasikara azo araraotina ny voasary laoranjy sy ny voasarimakirana.
Tsy manisy menaka
Ho an’ny “Pro Active”, mpikarakara hetsika sy mpisehatra amin’ny resaka fanjarian-tsakafo dia tsy voatery mividy akora lafo be na mampiasa menaka be vao afaka mampatsiro ny legioma sy voankazo hanina indrindra ny lasary. Fahaizana manao saosy vinegrety dia efa mampiavaka azy.
1. Lasary legioma “nature”
- Laisoa voatetika 100 g
- Kaokaombra voakiky 100 g
- Karaoty voakiky 100 g
- Tongolo gasy
- Tongolo be voatetika
Saosy vinegrety : Ranona voasary laoranjy 1 + Ranona voasarimakirana 2 + sira + dipoavatra
Lasary : Afangaro ao anatina lovia jobo avokoa ireo legioma voatetika sy voakiky. Atokana. Etsy an-daniny, totoina ny tongolo gasy ary afangaro amin’ny saosy vinegrety. Araraka anatin’ilay salady ary aroso avy hatrany.
Manan-karena fibra sady mampatanjaka ity salady ity. Mety tsara ho an’ireo olona te -hihena.
2. Salady amerikanina
- “Maïs doux bio” 1 boaty kely
- Kaokambra singany 2
- Voatabia 4
- Poavrao 2
- Krevety 250 g (efa voavaofy)
Saosy vinegrety : “Moutarde” 1 sotrokely + tantely 1 sotrokely + ranom-boasarimakirana 5 santilitatra + kotomila + menaka oliva + sira + dipoavatra
Salady : Rehefa voasasa avokoa ny legioma dia tetehina efajoro kelikely. Atokana. Ahandroana ny krevety ( tsara kokoa raha nahandroana amin’ny entona), mandritra ny 10 minitra eo ho eo, ary araraka anaty lovia jobo lehibe. Arotsaka anatin’io lovia jobo io ireo legioma sy ilay “maïs doux”. Rarahana ny saosy vinegrety, afangaro tsara ary aroso avy hatrany.
Mahatsara ny fandevonan-kanina sady ara-pahasalamana ity salady ity.
Isaorana ny “Pro Active”, nanaiky hanolotra an’ireo nahandro ireo